Fasaxyada dadweynaha iyo Saacadaha ganacsiga dukaamada | Business Victoria
Fasaxyada dadweynaha ee Victoria ee 2022 iyo 2023
Maalinta Sannadka Cusub
Sabtida 1da Janaayo
Isniin 3da Janaayo
(Maadaama Maalinta Sannadka Cusubi ay ku dhacday Sabti, Isniinta soo socota waa maalin dheeraad ah oo fasaxyada dadweynaha ah) Axad 1da Janaayo
Isniin 2da Janaayo
(Maadaama maalinta sannadka cusubi ay ku dhacday Axad, Isniintu waa maalin dheeraad ah oo fasaxyada dadweynaha ah)
Maalinta Ausraliya Arbacada 26ka Janaayo Khamiis 26ka Janaayo
Maalinta Shaqaalaha Isniin 14ka Maarso Isniin 13ka Maarso
Good Friday* Jimce 15ka Abriil Jimce 7da Abriil
Sabtida ka horeysa Axada Easter Sabti 16ka Abriil Sabti 8da Abriil
Axada Easter Axad 17ka Abriil Axad 9ka Abriil
Isniinta Easter Isniin 18ka Abriil Isniin 10ka Abriil
Maalinta ANZAC* Isniin 25ka Abriil Talaado 25ka Abriil
Maalinta dhalashada Boqorada Isniin 13ka Juun Isniin 12ka Juun
Jimcaha ka horeysa Cayaarka weyn ee ugu danbeysa ALF Jimce 23ka Sebteembar Waxay ku xiran tahay Jadwalka AFL†
Maalinta Koobka Melbourne Talaado 1da Nofeembar Talaadada 7da Nofeembar
Maalinta Ciida Kiristanka* Axada 25ka Diiseembar
Talaado 27ka Diiseembar
(Maadaama maalinta Ciidda gaaladu ay ku dhacday Axad, Tallaalada soo socota waa maalin fasaxa dadweynaha oo dheeraad ah) Isniinta 25ka Diiseembar
Maalinta Feerka Isniin 26ka Diiseembar Talaadada 26ka Diiseembar
†Jimcaha ka horeeya Ciyaarta Weynee AFL uguna dambeysa badanaa waxay ku dhacdaa Jimcaha ugu dambeeya Sebteembar. Website kan waxaa lagu cusbooneyniin doonaa taariikhda saxda ah marka ay soo baxaan jadwalada 2023 ee AFL ka.
Ogsoonow: Taariikhaha maalmaha fasaxu waa sax marka la daabaco laga waa laga yaabaa inay isbedelaan
Maalinta Koobka Melbourne waa fasax dhamaan Fiktooriya haddii aanay maalin qabanqaabin golaha aan-ka-tirsanayn metro.
* Maalmaha Ganacsiga Dukaamada ee Xaddidan
Sharciga Victoria wuxuu sheegayaa laba iyo bar maalmood oo ganacsiga Dukaamada ee Xadadin sannad kasta:
Inta u dhaxeysa saacadaha12.01subaxnimo iyo 1da galabnimo Maalinta ANZAC.
Maalmahan khaaska ah, waxaa loo ogol yahay oo kaliya dukaamo laga dhaafay.
Dukaamada laga soo reebayo
Dukaamada laga dhaafay oo buuxiya shuruudahan:
waxay leeyihiin 20 ama dad ka yar oo ka shaqeeya dukaanka wakhti kasta inta lagu jiro maalinta ganacsiga ee xaddidan; iyo
inta qof ee ka shaqeeya ganacsiga iyo meelaha kale ee la xiriira inaysan ka badneyn marnaba 100 inta lagu jiro 7 maalmood ee ka horeeyey maalinta ganacsiga ee xaddidan.
Maalmaha ganacsiga xaddidan ee laga dhaafayo
Noocyada mucayin ah oo hawleed ayaa laga saaray maalmaha ganacsi oo la xadadey. Waxay furi karaan mar kasta oo ay rabaan sanadka gudahiisa. Noocyada ganacsi oo laga dhaafay waa:
goobaha cuntooyinka fudud
goobaha wax kireeya (oo ay ku jiraan dukaamada fiidyowga).
Shaqooyinka saqda dhexe iyo bixinta khamrada maalmaha la xanibay ganacsiga
Ganacsiyada sida makhaayadaha, goobaha kafeega, baararka, kalaabyada iyo dukaamada khamrada gada, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin maalmo xanibaad siyaada ah. Fadlan ka eeg Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulationmacluumaad intaas ka badan.
Maalinta ANZAC Day-da xanibaadaha weheliya
Marka lagu daro kuwa kor lagu xusay, ANZAC Day-da (25ka Abriil) noocyada ganacsi ee soo socdaa maaha inay shaqeeyaan ka hor 1:00 duhurkii maalinta ANZAC Day-da:
Shaneemada (ama ha ahaato banaanka tan daawado ama tan meelah xiran lagu daawado)
madadaalada kale, waxaa ka mid ah laakiin aan ku ekayn, qoob ka cayaar markaas socda ama munaasabad muyuusiga ah, kunjeerto ama cayaar
Xaraashka Real Estate.
Warshadaha iyo bakhaarada waaweyn maalinta ANZAC Day-da
Ganacsiga ah warshaadaha ama bakhaarada ama goob ganacsi oo kasta oo hawl lagu qabanayo, ganacsigaas waa in la xiraa fasaxa ANZAC Day-da waase inay leedahay shuruudaha la xusay ee Xeerka ANZAC Day-da.
Macluumaad intaas ka badan oo khuseeya oo khuseeya furitaanka iyo shaqaynta ANZAC Day-da, fadlan eeg Xeerka ANZAC Day-da.
La soo deg maalmaha fasaxa dadweynaha ee Fiktooriya (iCAL) si loogu isticmaalo kaalandarkaaga.